Igama lesiqhelo: risperidone (ngomlomo) (ris PER i done)
Igama lebrand: Umngcipheko
Udidi lweziyobisi: I-antypychychotic ye-Atypical
By Kendra Cherry; Ukuhlaziywa nguSanjai Sinha, MD. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoMatshi 1, 2020.
IRisperidone Iyeza lokunyanga ukusebenza kwengqondo ngokusebenza ngokutshintsha iimpembelelo zeekhemikhali kwingqondo.
I-Risperidone isetyenziselwa ukunyanga i-schizophrenia kubantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka eli-13 ubudala ubuncinci.
I-Risperidone ikwasetyenziselwa ukunyanga iimpawu zesifo esiyi-bipolar (uxinzelelo lwemanic) kubantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka eli-10 ubuncinci.
I-Risperidone ikwasetyenziselwa ukunyanga iimpawu zokucaphuka kubantwana be-autistic abaneminyaka emi-5 ukuya kweli-16 ubudala.
I-Risperidone ayivunyelwanga ukuba isetyenziswe kubantu abadala abanesifo sengqondo esihambelana nesifo sengqondo.
Musa ukunika i-risperidone emntwaneni ngaphandle kwengcebiso kagqirha.
Ngelixa uthatha eli yeza, unokuba novakalelo ngakumbi kubushushu obugqithisileyo obufana nobushushu okanye ukubanda kakhulu. Kuphephe ukubanda kakhulu, okanye ukuba nobushushu okanye ukomisa. Sela iziselo ezininzi, ingakumbi xa kushushu kwaye ngexesha lokuzilolonga. Kulula ukuba nobushushu obunobushushu kwaye uphelelwe ngamanzi emzimbeni ngelixa usela la mayeza.
I-Risperidone inokuphazamisa ukucinga kwakho okanye indlela osabela ngayo. Qaphela ukuba uqhuba okanye wenza nantoni na efuna ukuba uqaphele. Ukusela utywala kunokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga ezithile zeli yeza.
Yeka ukusebenzisa eli yeza kwaye ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba unefiva, izihlunu eziqinileyo, ukudideka, ukubila, ukukhawuleza okanye ukungalingani kwentliziyo, ukungahambi kakuhle kwemisipha ebusweni okanye entanyeni, ukungcangcazela (ukungcangcazela okungalawulwayo), ingxaki yokuginya, ukuziva ukhaphukhaphu, okanye isiqaqa.
Akufanele usebenzise i-risperidone ukuba uyaliwa.
I-Risperidone inokunyusa umngcipheko wokufa kubantu abadala abanesifo sengqondo esihambelana nesifo sengqondo esixhalabisayo kwaye ayamkelwa le nto.
Ukuqinisekisa ukuba eli yeza likhuselekile kuwe, xelela ugqirha wakho ukuba wakhe wanayo:
isifo sentliziyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, iingxaki zesingqisho sentliziyo, ukubetha kwentliziyo okanye ukuhlaselwa yintliziyo ;
isifo seswekile (okanye izinto ezinobungozi njengokutyeba kakhulu okanye imbali yosapho yeswekile);
ukubala kweeseli ezimhlophe zegazi (i-WBC);
umhlaza webele ;
oxycodone hcl 10mg ithebhulethi epinki
uxinano lwamaminerali amathambo;
Isifo sikaParkinson ; okanye
Ithebhulethi ye-risperidone yokutshabalalisa ngomlomo inokuba ne-phenylalanine. Tshela ugqirha wakho ukuba unayo phenylketonuria (IPKU).
Ukuthatha amayeza antipsychotic kwiinyanga ezi-3 zokugqibela zokukhulelwa kunokubangela iingxaki kusana olusandul 'ukuzalwa , ezinjengeempawu zokurhoxa, iingxaki zokuphefumla, iingxaki zokondla, ukungxama, ukungcangcazela, kunye neziqhwala okanye izihlunu eziqinileyo. Nangona kunjalo, unokuba neempawu zokurhoxa okanye ezinye iingxaki ukuba uyeka ukuthatha iyeza lakho ngexesha lokukhulelwa. Ukuba ukhulelwa ngelixa uthatha i-risperidone, ungayeki ukuyithatha ngaphandle kwengcebiso kagqirha wakho.
Ukuba ukhulelwe, igama lakho linokudweliswa kwirejista yokukhulelwa ukulandelela iziphumo zerisperidone emntwaneni.
Eli yeza linokuchaphazela okwethutyana ukuchuma (ukukwazi ukuba nabantwana) kubafazi.
I-Risperidone inokudlula kubisi lwebele kwaye inokubangela iziphumo ebezingalindelekanga kusana. Ukuba uncancisa xa usebenzisa eli yeza, xelela ugqirha wakho ukuba ngaba umntwana uneempawu ezinjengokozela, ukungcangcazela, okanye ukungahambelani nezihlunu.
Musa ukunika eli yeza emntwaneni ngaphandle kwengcebiso kagqirha.
Ndingayithatha njani i-risperidone?
Thatha i-risperidone ngokuchanekileyo njengoko kumiselwe ngugqirha wakho. Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho yonyango kwaye ufunde zonke izikhokelo zamayeza okanye amaphepha emiyalelo.
IRisperidone inokuthathwa kunye okanye ngaphandle kokutya.
Susa ithebhulethi eyahlayo ngomlomo kwiphakheji kuphela xa ukulungele ukuthatha iyeza. Beka ithebhulethi emlonyeni wakho kwaye uyivumele inyibilike, ngaphandle kokuhlafuna. Ukuginya amatyeli aliqela njengoko ichiza lichithwa.
Linganisa ngenyameko iyeza lolwelo. Sebenzisa isirinji yedosi ebonelelweyo, okanye sebenzisa isixhobo sokulinganisa idosi (hayi icephe ekhitshini).
Sukuxuba ifayile ye- ulwelo iyeza elinekola okanye iti.
Kungathatha ukuya kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba iimpawu zakho ziphuculwe. Qhubeka usebenzisa amayeza njengoko kuyalelwe kwaye uxelele ugqirha ukuba iimpawu zakho aziphucuki.
Gcina kubushushu begumbi kude nobushushu, ubushushu, kunye nokukhanya. Musa ukwenza amayeza alulwelo ukuba ubande.
Thatha iyeza ngokukhawuleza, kodwa ungatsiba idosi ephosiweyo ukuba sele ilixa ledosi yakho elandelayo. Musa ukuthatha amanani amabini ngexesha elinye.
Fumana iyeza lakho lizaliswe ngaphambi kokuba uphelelwe ngamayeza ngokupheleleyo.
Iimpawu zokudlula ngaphezulu zinokubandakanya ukozela okukhulu, ukukhawuleza kwentliziyo , uziva ukhaphukhaphu, utyhafile, kwaye ushukuma ungashukumi emehlweni, ulwimi, umhlathi, okanye intamo.
Gwema ukuqhuba okanye ukwenza umsebenzi oyingozi de ube uyazi ukuba i-risperidone iya kukuchaphazela njani. Ukuphendula kwakho kunokungahambi kakuhle.
Gwema ukuphakama ngokukhawuleza kwindawo yokuhlala okanye yokulala, okanye unokuziva unesiyezi. Ukuba nesiyezi okanye ukozela kakhulu kunokubangela ukuwa, ukwaphuka okanye ukulimala.
Kuphephe ukusela utywala. Iziphumo ebezingalindelekanga ezinobungozi zinokwenzeka.
Ngelixa uthatha i-risperidone, unokuba novakalelo ngakumbi kubushushu obugqithisileyo obufana nobushushu okanye ukubanda . Kuphephe ukubanda kakhulu, okanye ukuba nobushushu okanye ukomisa. Sela iziselo ezininzi, ingakumbi xa kushushu kwaye ngexesha lokuzilolonga.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeRisperidone
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo Iimpawu zokungabikho komzimba kwi-risperidone: imihlathi ; ubunzima bokuphefumla; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Upela njani i-suboxone
Biza ugqirha wakho kwangoko ukuba unayo:
intshukumo engalawulwayo yemisipha ebusweni bakho (ukuhlafuna, ukubamba imilebe, ukufinga iintshiya, ukushukuma kolwimi, ukuqhwanyaza okanye ukuhamba kwamehlo);
ukudumba kwamabele okanye ukuthamba (emadodeni okanye kwabasetyhini), ukukhutshwa kwengono, ukungabi namandla , ukungabikho komdla kwisini, ukungayi exesheni;
ukusabela kwenkqubo ye-nervous - izihlunu eziqinileyo (eziqinileyo), umkhuhlane omkhulu, ukubila, ukudideka, ukubetha kwentliziyo okukhawulezayo okanye okungalinganiyo, ukungcangcazela, uziva ngathi ungadlula;
iiseli zegazi ezimhlophe ezisezantsi - ubuthathaka ngesiquphe okanye ukugula, umkhuhlane, Ukugodola umqala obuhkungu , izilonda zomlomo, iintsini ezibomvu okanye ezidumbileyo, ingxaki yokuginya, izilonda zolusu, iimpawu ezibandayo okanye umkhuhlane, ukukhohlela, ukuphefumla nzima;
amanqanaba asezantsi eeplatelets egazini lakho - ukugruzuka ngokulula, ukopha okungaqhelekanga (impumlo, umlomo, ubufazi, okanye i-rectum), amabala abomvu okanye abomvu phantsi kolusu lwakho;
iswekile ephezulu yegazi ukwanda kokoma, ukwanda komchamo, umlomo owomileyo, ivumba lokuphefumla elinesiqhamo; okanye
Ukwakhiwa kwepenisi okubuhlungu okanye okuhlala iiyure ezi-4 okanye ngaphezulu.
Iziphumo eziqhelekileyo zeempembelelo ze-risperidone zingabandakanya:
intloko ebuhlungu ;
isiyezi, ukozela, uziva udiniwe;
ukungcangcazela, ukujijeka okanye ukungalawuleki kwezihlunu;
ukuphazamiseka , ixhala , ukungaziva;
umlomo owomileyo, isisu esimoshakele , urhudo , ukuqhina ;
iimpawu ezibandayo ezinje ngempumlo exineneyo, ukuthimla, umqala obuhlungu.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-risperidone?
Ukuthatha i-risperidone kunye nezinye iziyobisi ezikwenza ukuba ulale okanye unciphise ukuphefumla kunokubangela iziphumo ezinobungozi okanye ezisongela ubomi. Buza ugqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa iyeza le-opioid, ipilisi yokulala, isithambisi semisipha, okanye iyeza loxinzelelo okanye ukubanjwa.
Tshela ugqirha wakho ngawo onke amayeza akho, ngakumbi:
uxinzelelo lwegazi amayeza;
fluoxetine ( Iprozac ) okanye paroxetine ( Paxil ); okanye
Olu luhlu alugqitywanga. Amanye amachiza anokusebenzisana ne-risperidone, kubandakanya amayeza kunye namayeza e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Ayizizo zonke iindlela zokunxibelelana kweziyobisi ezidweliswe apha.
Khumbula, gcina oku kunye nawo onke amanye amayeza apho abantwana bangenakufikelela khona, ungaze wabelane nabanye ngamayeza akho, kwaye usebenzise i-risperidone kuphela xa umiselwe.
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 21.03.
I-ondansetron hcl 8 mg
amayeza amatsha e-multiple sclerosis
uyifaka njani ilayiti yokukhanyisa
isetyenziselwa ntoni i-ondansetron hcl
Ngaba i-tylenol pm ikhuselekile ngexesha lokukhulelwa